Imiphumela ye-ADHD ekusebenzeni kwesikole - Ukuqeqeshwa Kwengqondo
Ulapha: Ikhaya » Izihloko » Imiphumela ye-ADHD ekusebenzeni kwesikole
Ukuthi i-ADHD ezimweni eziningi kunomthelela omubi ekusebenzeni kwezemfundo kuyaziwa. Ngokwengxenye, sesivele sigxile kulesi sihloko ngokuya kubona yiziphi izici ze-IQ ezinomthelela omkhulu ekusebenzeni kwesikole lapho kuba khona i-ADHD diagnost.
Kepha manje ake sikhulume ngolunye usesho. Kulokhu elinye iqembu lososayensi libukeze izifundo ezithi, phakathi kuka-1980 no-2012, zaphenya imiphumela ye-ADHD ezivivinyweni ezijwayelekile zokufunda esikoleni (ukufunda, ukubhala, ukubala nokuthile okufana namasiko ajwayelekile) nasekusebenzeni kwesikole. Ekwenzeni lo msebenzi, u-Arnold nozakwabo babuza imibuzo ethile futhi yiyona ebaluleke kakhulu:
Ngabe i-ADHD ikuthinta kanjani ukufunda kwesikole ngemuva kweminyaka emibili noma ngaphezulu?
Ukwelashwa okuhlukahlukene kwe-ADHD kukuthinta kanjani ukusebenza kwesikole?
Izinhlobo ezahlukahlukene zokwelashwa kwe-ADHD zithinta kanjani izici ezithile zokufunda kwesikole?
Ukutholwa kokuqala okuvelile kulolu cwaningo iqiniso lokuthi abantu abane-ADHD bayakwenza lokho non alutholwanga ukwelashwa futhi akhombisa amaphuzu aphansi ngama-75% - 79% wezinyathelo ezicatshangelwe (izivivinyo ezijwayelekile kanye nokuphumelela ezifundweni).
Umphumela wesibili uphathelene nokuqhathanisa phakathi kwabantu abaphethwe i-ADHD abangalashwa. Uma kuqhathaniswa neqembu labantu abangafundile, labo abane-ADHD abathole uhlobo oluthile lokwelashwa bakhombise ukuthuthuka okukhulu kuma-80% ezivivinyo ezimele kanye no-40% wamapharamitha wokusebenza kwesikole.
Ekugcineni, umphumela wesithathu wawuphathelene nomehluko phakathi kwezindlela zokwelapha: uma ukwelashwa bekungokwamakhemikhali, ama-75% ezivivinyo ezimele no-33% wamapharamitha ahlobene nokusebenza kwesikole athuthukile; uma ukwelashwa bekuyikho non kwezamakhemikhali, ukuthuthuka bekubandakanya ama-75% ezivivinyo ezimele kanye no-50% wamapharamitha wesikole; ekugcineni, uma ngabe ukwelashwa bekuhlangene (ekhemisi futhi kungeyona ekhemisi ngasikhathi sinye), ukuthuthuka okuphathelene ne-100% yezivivinyo ezimele kanye no-67% wamapharamitha wesikole.
Njengoba kulindelekile, i-ADHD engalashwa ihlotshaniswa namathuba aphezulu emiphumela emibi yesikole. Kodwa-ke, kulezi zimo kungasiza ukungenelela ngezindlela ezithile zokwelapha, zombili zamakhemikhali nangezokwelapha. Ngaphezu kwalokho, ukuhlanganisa lezi zindlela zokwelapha kufakazela ukuthi kungasiza ukukhulisa ukusebenza kwesikhathi eside kwezemfundo (zonke izifundo ezihloliwe zaba ngcono okungenani iminyaka emibili).
Kumele kwaziwe, nokho, ukuthi umehluko phakathi kwezinhlobo ezahlukene zokwelashwa awuzange uhlaziywe kulolu cwaningo. Ngakho-ke kubonakala kufanelekile ukuthi abacwaningi bagxile ezinhlobonhlobo zokwelashwa kanye namasu ahlukile wemfundo angasebenza kangcono, futhi ngesisekelo sezimpawu zeziguli ngazinye.
U-Arnold, LE, Hodgkins, P., Kahle, J., Madhoo, M., & Kewley, G. (2020). Imiphumela yesikhathi eside ye-ADHD: impumelelo yezifundo nokusebenza. Ijenali yokuphazamiseka ukunakwa, 24(1), i-73-85.
ADHD, adhd nokufunda, adhd nomphumela wokwelashwa, ukusebenza kwe-adhd kanye nezifundo
Imiphumela ye-ADHD ekusebenzeni kwesikole2020-03-252020-03-25http://www.trainingcognitivo.it/wp-content/uploads/2017/08/nuovologo_87e9aa904327d53301f73f9191e17e49.pngUkuqeqeshwa kwengqondohttps://www.trainingcognitivo.it/wp-content/uploads/2020/03/gli-effetti-delladhd-sul-rendimento-scolastico.png200px200px
I-ADHD iminyaka engama-20 ngemuva kokuxilongwa. Imiphumela emalini etholwa yimaliI-ADHD, izindatshana